musha AFRAN BIOGRAPHY STORI Nigerian Singers Wizkid Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yemuimbi wekuNigeria anozivikanwa se "Wizkid". Yedu Wizkid Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevatengesi vezvemimhanzi vanobudirira kutengesa mimhanzi muNigeria. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveWizkid's biography iyo inonyanya kufadza. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Wizkid Upenyu hwepakutanga uye Mhuri Yemashure:
Kutanga kubva, mazita ake azere Ayodeji Ibrahim Balogun. WizKid, sekuzivikanwa kwake anozivikanwa, akaberekwa musi wegumi nematatu waChikunguru 16 kuSurulere kuLagos, Nigeria. Ndiye oga mwanakomana akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Jane Dolapo nababa vake, Alhaji Muniru Olatunji Balogun.
Nyika yeNigerian yedzinza reYoruba ine midzi yekuWest Africa yakakurira kuShitta muSurulere, Lagos nyika kwaakakurira pamwe nehanzvadzi dzake gumi nembiri (ah iwe unazvo chaizvo !!) mumhuri ine barika yezvinamato zvakasanganiswa.
Kukura muShitta, Wizkid - uyo amai vake aive muKristu uye baba vake vari muSunni Muslim - akasarudza kuita chitendero chaamai vake uye kazhinji vaizomutevera kuenda kuchechi, kwavakatanga kufarira mimhanzi.
Wizkid Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Pamusoro pezvedzidzo yaWizkid, akadzidza pachikoro cheGjeje-Ode girama muIjebu-Ode, Ogun state. Panguva iyo Wizkid anga aine makore 11, akabatana nekeya yake yekuchechi kwaakatanga kuimba uye kazhinji aipinda kudzidziswa kwaya yake kana apedza chikoro.
Paaive achiimba mukwaya yechechi yake, Wizkid akatora chinzvimbo chemumiriri wekeya anotungamira nekuti aive nyanzvi yekutaura. Nenguva isipi akatanga kutora zita rechinhanho, 'Lil Prinz' iro raakashandisa pane zvese zvaaiita pazera nyoro rakadai.
Hazvina kutora nguva refu iye muenzi wechidiki ane tarenda paakasiya chikoro chesekondari achitarisa mumimhanzi yake yekuridza shamwari neshamwari mumitambo dzakasiyana siyana. Akazodzokera kumberi kuti anoenderera mberi nedzidzo yake sezvo kushanda kwake mukuwana mimhanzi kwaive kusiri kuunza mugumo unotarisirwa.
Wizkid Achangotanga Basa Rehupenyu:
Yakafuridzirwa nazviridzwa saBob Marley, Fela Kuti, King Sunny Ade, 2 Chiso Idibia, uye Sauti Sultan, kutsunga kwaWizkid kwekupinda mumimhanzi sezvo basa rake rekutanga rakafemerwa. Akagadzira boka rinozivikanwa se 'rine mbiri shanu' iro rinosanganisira shamwari dzake kubva kuchechi yake.
Wizkid aifanira kushanyira mimhanzi studio kazhinji kuitira kuti ave muimbi anobudirira uye awane mvumo yevabereki vake yekusarudza nzira yebasa mumimhanzi. Pasina nguva refu, mudiki ane tarenda akave nerombo rekudzidziswa nekudzidziswa naNaeto C.
Wizkid Road Kuenda Mukurumbira Nyaya:
Wizkid nevamwe vake, 'Vanokudzwa Vashanu', vakaburitsa albhamu iyo haina kuzobudirira. Kuve netariro, Wizkid akatarisa zvakanyanya pakuzadzisa kurota kwake kwekuve muimbi ane mukurumbira. Akazosangana naOJB Jezreel, mugadziri wezvekodhi uyo akava chipangamazano wake. Jezreel akamupangira kuti arege kurekodha kwegore uye adzidze zvimwe nezvekugadzirwa kwemimhanzi nekuona vaimbi vane ruzivo.
Wizkid akashanyira studio yaJezreel kakawanda kuti atarise kugadzirwa uye kurekodiwa kwenyasha 2 nenyasha na2 Face Idibia uye Sound Sultan'sut reutare album Jagbajantis. Kunyangwe vabereki vake vaive vasiri kutsigira chishuwo chake, muimbi wechidiki ane tarenda, haana kurasa tariro yekuita budiriro yakanaka.
Wizkid Rise To Fame Nyaya:
Mu2009, Wizkid akasaina rekodhi rekodhi neBanky W's Kingdom Mates Entertainment (EME). Akatangawo kurekodha bhaisikopu yake yeti studio, 'superstar' yakaburitswa mu2010. Iyo albha iyo yaive na 'Holla kuWako mukomana' sedombo rekutungamira reiyo, yakamuwanira mubairo wakatevera kuHeadies mu2011.
Nekuda kusvika parizvino, Wizkid ndiye mumwe wevanonyanya kufarirwa mimhanzi yeNigerian pasi rese uye akaita chiratidzo chake muindasitiri yemimhanzi neruoko rwake rwuchangoburwa rwega ruchinzi “Brown Skin Girl” na Beyonce. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Hupenyu hwehukama Hupenyu:
Wizkid achiri kuzoroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana uye iye zvino hukama. Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, mugadziri uyu anga achibatanidzwa nevasikana vasiri pasi pevatanhatu kubva pakukwira kwake mukurumbira. Zvinosanganisira; Sophie Rammal, Sola Ogudugu, Tonto Dikeh, Victoria Kimani, Binta Diallo, Jada Pollock maneja wake, naTania Omotayo kutaura mashoma.
Hukama hwake nevakadzi vambotaurwa hwakatendeuka vana mamas - Sola Ogudugu, Binta Diallo, naJada Pollock - vakapa kuberekwa kwevanakomana vake vatatu Boluwatife, Ayodeji, uye Zion Balogun zvichiteerana.
Nezve chimiro chake chehukama iyezvino panguva yekunyora, Wizkid anonyeperwa kuve kufambidzana muimbi Tiwa Savage. Wizkid naTiwa vauya pamwe chete pane dzinoverengeka kuratidzira seanodanana. Muna 2018 Wizkid akaisa Tiwa Savage muvhidhiyo yake "Fivha" iyo yakaratidzira zviitiko zvakawanda zvevakadanana. Vhidhiyo yemimhanzi ye "Fivha" yakabata Wizkid achishungurudza uye kudanana naTiwa savage, nekudaro, ichiita runyerekupe rwekukanganisa rudo pakati pavo.
Wizkid Hupenyu hwemhuri:
Wizkid anobva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaWizkid:
Alhaji Muniru Olatunji Balogun ndiye baba vaWizkid. Kunyangwe zvaunogona kufunga, baba vaWizkid - muSunni Muslim - aisambova mupfumi. Akawana zita rakakurumbira kwazvo rakanzi Mogaji Adinni pazuva re9th raKubvumbi, 2017. Kunyangwe hazvo aive asiri mukutsigira kwaWizkid pakutanga kuda kuve mukurumbira wemimhanzi, budiriro yaWizkid yakabatsira kuwana kuvimba kwababa vake. Ivo baba ve13 vachiri kugara muShitta Surulere, Lagos mushure mekuramba kutamira kuimba nyowani Wizkid anga avatengera muLekki, Lagos.
Nezve amai vaWizkid:
Jane Dolapo ndiWizkid amai. Mwanakomana wake agara achimurumbidza uye kumutenda sechimwe chezvinhu zvakakosha kuti abudirire, nekuda kweminamato yake isingachinji kwaari. Jane Dolapo muChristu wechipentecosti uye anogara achitaridzwa sehondo yemunamato uye musana wemwanakomana wake.
Wizkid haana hama asi ane hanzvadzi gumi nembiri. Nyeredzi yekuNigeria pop anofarira Lade Balogun, mudiki pakati pehanzvadzi dzake uye haatambe nechero chii nezvake. Anopinda chimwe chezvikoro zvinodhura kumaodzanyemba emadokero eNigeria. Mukoma wake mukuru Yetunde Balogun akafirwa nemurume wake Seun Rowland Awoniyi kune kenza mu2016.
Nezve hama yaWizkid:
Kure kubva kumhuri yekwaWizkid yepedyo, zvishoma zvinozivikanwa pamusoro pababamukuru vake amai vake pamwe nasekuru nasekuru vake. Saizvozvo, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini na babamunini vaWizkid, uye hapana zvinyorwa zvevatezvara vake, muzukuru, nababamunini.
Chii chinoita kuti Wizkid arere? Gara kumashure apo isu tinokuunzira magariro ehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuti utore mufananidzo wake. Kutanga, Wizkid's persona isanganiswa yekenza zodiac maitiro.
Iye akavimbika, ane moyo, anonzwira tsitsi, anonyengetedza, ane moyo munyoro uye anofungidzira zvakanyanya. Chinhu chake chaanofarira kuita pakutenga. Iye zvakare ane zvimwe zvinofarira muArt, kushandisa nguva nevana, kubatsira vadikani, uye kuimba.
Wizkid ane mheni inofungidzirwa inosvika zviuru gumi nemana zvemadhora panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaWizkid kunobva zvachose mumimhanzi yake yekuedza uye kupedzisa kunobata nema brands saPepsi apo ongororo yemashandisirwo emari yake maitiro anoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nezvinhu zvaWizkid, ane dzimba mbiri huru uye dzinodhura chaizvo. Imwe yemakamuri iri kuLekki, muLagos Nigeria, nepo imwe iri muLos Angeles, USA. Imba yeLekki inonzi inofanirwa #70 mamirioni.
Iyo Nigeria popstar zvakare inawo mamwe kuunganidzwa kwemotokari dzinosanganisira; yakuda iyo Honda Accord I-VTEC, Porsche Cayenne, Mercedes 2012 Compressor, BMW X6, Hyundai Sonata, Bentley, uye Porsche Panamera.
Wizkid Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Wizkid yehucheche nyaya uye biography pano pane zvishoma zvinyatso kuzivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi zvisingawanzo kuverengerwa mu bio yake.
Wizkid akagadzira #10,000 kubva kutengeswa kuzere kwealbum yake yekutanga (ine Glified 5)
Nezve chitendero chake, Wizkid muKristu kunyangwe baba vake vari vechiSunni Muslim uye akakurira kuimba mukwaya yechechi.
Iye anoda inking muviri wake uye ane akasiyana marudzi e tatoo paari. Zvinosanganisira tattoo yepaFela ane mukurumbira ruoko kurudyi uye musoro weshumba kuruboshwe rwake.
Muchirongwa chake chedzidzo che3rd, Wizkid akadonha kubva kuOut City University kwaaidzidza 'Zvehukama' mu2011.
Wizkid anoshingairira kuita mabasa erudo. Akashanyira nharaunda muBenin Republic kuti ape zvimwe zvekudya nezvekushandisa kune vashoma mukana.
Thanks for reading vedu Wizkid Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Kelly Kurume 5, 2020 At 5:07 pm
Yakagadziridzwa zuva: June 26, 2020